जिपी अस्पतालको सेवा पुन: सञ्चालन « AayoMail
तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका-५ बेलचौतारास्थित जिपि कोइराला श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्रको सेवा पुनःसुचारु भएको छ। उपचार केन्द्रका प्रयोगशालाका कर्मचारीलाई कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि यही असोज १५ गतेदेखि सेवा बन्द गरिएको थियो।
कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङ गरिएका ५० जनाको पिसिआर रिपोर्ट आएसँगै उपचार केन्द्रले आइतबारदेखि सम्पूर्ण सेवा सुचारु गरेको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. रामकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनका अनुसार कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङबाट उपचार केन्द्रका थप पाँच जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। केन्द्रका ४२ र अन्य ८ गरी ५० जनाको स्वाब परीक्षणका लागि पठाइएकामा बाँकी सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ।
'कोरोना सङ्क्रमण भएकालाई यसै केन्द्रको आइसोलेशनमा राखेर उपचार शुरु गरेका छौ, बाँकीको रिपोर्ट नेगेटिभ आएकाले सम्पूर्ण सेवा सुचारु गरिएको छ,' कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने, 'उपचार केन्द्रलाई पूर्ण सुरक्षित बनाएर सेवा सुरु गरेका छौ।' कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङबाट गरिएको स्वाब परीक्षणमा केन्द्रका चिकित्सिक, अनमि, सुरक्षागार्ड, लेखा र प्रशासन शाखाका कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि भएको थियो।
यसैबीच दमौली अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेट डा. सुनिल पौडेललाई कोरोना पुष्टि भएको छ। शनिबार स्वाब पठाएकामा आइतबार प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उनलाई कोरोना पुष्टि भएको हो।
घाँटीमा समस्या आएपछि स्वाब पठाएकामा कोरोना पुष्टि भएको उनले बताए। 'एकदिन ज्वरो पनि आएको थियो, घाँटीमा पनि समस्या देखिएको थियो,' उनले भने, 'अहिले पनि घाँटीमा अलिकति समस्या छ।'
उनीसँगै अस्पतालका कार्यालय सहयोगीमा पनि कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। पाँच जनाको स्वाब पठाइएकामा तीन जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको छ। अस्पतालको सेवा भने सञ्चालनमै रहने भएको छ। अन्यको स्वाब पठाएर रिपोर्ट कस्तो आउँछ त्यसपछि थप निर्णय गरिने अस्पतालले जनाएको छ।